म जनप्रतिनिधि हुँदाको योगदान हो कपनको विकासः एमाले नेता अधिकारी (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक ५ गते २०:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । अहिले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाब केन्द्रित गतिविधि बारे धेरैको लागि चासो बढ्न थालेको छ । चुनाबका लागि कसले टिकट पाउने ? भन्ने होडमा विभिन्न दलका स्थानिय राजनीतिकर्मी तथा केन्द्रिय नेताहरु आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा रहेर केटिएम खबर डट कमले विशेष सम्वादलाई जोड्दै आइरहेको छ । केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटिका सदस्य एवं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका कपनका इन्चार्ज तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ प्रदेश ‘ख’ का नेकपा एमालेका प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सिफारिस व्यक्ति मिठाराम अधिकारीसंग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
म लामो समय देखि राजनीतिमा सक्रिय छु । २०३६ सालदेखी हाम्रो जनपक्षिय उम्मेदवार पद्म रत्न तुलाधरको पालादेखी नै कम्युनिष्ट राजनीतिलाई अगाडी बढाउन थाले । म हर्षित हुँदै पद्म रत्नको पर्चा, पम्प्लेट घरमा ल्याएर टास्दै उहाँका क्यासेटहरु गाउमा बजाउदै जनपक्षिय उम्मेदवार पद्म रत्न तुलाधरलाई विजयी बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा (अहिले बुढानिलकण्ठ पहिले कपन गाउ विकास समिति) हामीहरुले यस्तो उम्मेदवार जितायौ भने हाम्रोे हित हुन्छ भनेर लागे । त्यो अभियानदेखि मैले राजनीति सुरु गरे ।
अहिले यहाँको काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ प्रदेश ‘ख’ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट नाम सिफारिस भएको छ । यसलाई केन्द्रित गर्दै यहाँको व्यस्तता केमा केन्द्रित छ ?
अहिलेको व्यस्तता भनेको हामी टोल–टोलमा कार्यक्रमहरु गर्दै छौँ ।
मैले २०५४ सालको स्थानिय चुनाबमा जिति सके पछी मैले कपनमा परिवर्तन गरेको छु । जुन जनताहरु ०५४ सालमा मतदानग गर्न जादा त्यो लाइनमा बसेर भोट हाल्दा केही जनताहरु बेहोस भएका थिए । मलाई त्यो साह्रै चित्त दुख्यो । जुन मतगणना भइ सकेपछी म विजयी भए । त्यस पछी मलाई लाग्यो जनताहरुले मेरो लागि यत्ती गरिसके पछी, मैले १८ घण्टा काम गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो र म जनताको सेवामा अगाडी बढे ।
त्यति बेला कपनमा कुनै यातायातको साधनहरु चल्ने थिएन, कतै जान सक्ने बाटो थिएन । पाइन्टलाई गर्धनमा राख्थ्यौ, जुत्तालाई हातमा बोकेर सुकेधारा आई सकेपछी घासमा घुट्टा पुछेर अनी मोजा लगाएर हाम्रा सरकारी कर्मचारी, गाउले दाजुभाई, दिदी बहिनीहरु त्यसरी शहर तीर जान्थ्यौ ।
म निर्वाचित भइसकेपछी अब मैले विकास निर्माणका कामहरुलाई सुरु गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो र जनतालाई चेतना जगाउनु पर्छ, जनतालाई आफ्नो घुट्टामा आफै उभिने बनाउन सक्नु पर्छ भनेर सबै भन्दा पहिले मैले यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका–४ र कपन गाउ विकास समिति जोड्ने धोविखोलामा निलो पुल निर्माणको काम सुरु गरे । अहिले पनि त्यो पुल प्रख्यात छ । पहिलो विकासको काम मैले त्यहिबाट सुरु गरे । त्यसपछी काठमाडौँमा चल्ने टुक–टुक ट्याम्पु, बिक्रम ट्याम्पु चलाउनलाई सुरु गरे । त्यति बेला कच्ची बाटो थियो । त्यसपछी संयुक्त यातायातलाई यहाँ चलाउनु पर्यो भनेर आग्रह गरे यस्तो बाटोमा कसरी चलाउने ? भन्ने उहाँहरुको यस्तो प्रश्न थियो । त्यसपछी जनताको २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत लगानीबाट कपनका धेरै जसो बाटोहरुमा पिच गराउन सुरु गरे ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ प्रदेश ‘ख’ को टिकटका लागि अन्तिम तयारी के छ ?
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ प्रदेश ‘ख’ मा म लगायत ७ जना उम्मेदवारहरु टिकटका लागि दावेदार भएका छौँ । केही दिन पछाडी कसले टिकट पाउछ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छ ।
सात जना मध्य तपाई कस्तो आकांक्षी हो ?
म जनताको पपुलर उम्मेदवार हो । हिजो मैले गाउ विकास समिति चलाउदा कुनै पुर्वाग्रह नराखी काम गरेको कारणले गर्दा अहिले सबै पार्टीका जनताहरु कुन बेला मंसिर २१ आउछ र मिठाराम अधिकारीले टिकट पाउछ र हामी त्यसलाई मतदान गर्न आतुर छौँ भनेर अहिले प्रत्येक भेलाहरुमा मेरा बुढानिलकण्ठबासी तथा मुख्यतया कपनबासीहरुले यस्तो भनिरहनु भएको छ ।
लामो समयदेखी यहाँ स्थानिय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, साविकको कपन गाविसको निर्वाचित गाविस अध्यक्ष पनि हुनु भयो, अहिले निर्वाचनका लागि आकांक्षी हुनु हुन्छ , यहाँले नेतृत्व जाम गर्नु भयो ? भन्ने पनि कुरा उठ्न थालेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
नेतृत्व जाम भन्दा पनि देश संक्रमण कालमा थियो । त्यसले गर्दा यो समस्याहरु आएका हुन् । देश संक्रमण काल नआएको भए धेरैका लागि आफ्नो राजनीति अगाडी बढि सक्थ्यो । यसरी नै निर्वाचन भइरह्यो भने सहज हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।
मिठाराम अधिकारीसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः